मोदी सरकार र ममता बनर्जीको ‘शक्तिसंघर्ष’ ले कोरोना नियन्त्रण अभियानमा ‘धक्का’ – Health Post Nepal
मोदी सरकार र ममता बनर्जीको ‘शक्तिसंघर्ष’ ले कोरोना नियन्त्रण अभियानमा ‘धक्का’
२०७७ वैशाख १५ गते १९:५७
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपको मारमा दार्जीलिङ पहाड, कालेबुङ, सिक्किम, आसामसम्मका नागरिक परेका छन्।
भारतको केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन जारी रहँदा दार्जीलिङको पर्यटन क्षेत्र र चिया उद्योग तहसनहस भएका छन्।
लकडाउनका कारण दार्जीलिङ जिल्ला, कालेबुङ जिल्ला, सिलगढी डुवर्स तराईको अवस्था सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। मानिसहरूले घरभित्र बसेर लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि कोरोनाको संक्रमणबाट कालेबुङकी सुनितादेवी सिंहको मृत्युपछि यस क्षेत्रमा निकै आतङ्क छायो। र, चर्चा पनि उतिकै चल्यो। त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा धेरै मानिसहरूलाई राखियो।
तर, सबैको स्वास्थ्य परीक्षण नेगेटिभ आएपछि दार्जीलिङ र कालेबुङ केही हदसम्म त्रासमुक्त भएका छन्। अहिले कालेबुङमा कोही पनि क्वारेन्टाइनमा छैनन्।
दार्जीलिङमा पनि अवस्था गम्भीर छन्। तर, बङ्गालमा कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि ममता बेनर्जी नेतृत्वको सरकारले पर्याप्त तत्परता नदिएको दावी गर्दै दार्जीलिङ–कालेबुङका सांसद राजु बिष्टले केन्द्र सरकारलाई गत चैत २४ गते जानकारी पठाएका थिए। बिष्टले पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीश धनकरलाई पनि चैत ३० गते पत्राचार गरेका थिए।
केन्द्रबाट आएको स्थलगत जाँच टोली आएको छ। सांसद बिष्टले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केन्द्र सरकारले टोली पठाएपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रणमा फट्को मार्न सकिने बताए।
राहतमा ‘राजनीति’, भाजपाको सांसद ‘बन्धक’
यद्यपि, पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेसका सांसद, विधायक र पञ्चायत प्रधान र कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छन्।
तर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस लगायत पार्टीका सांसदहरूलाई खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि राहत बाँड्न पाएका छैनन्।
जलपाइगढी जिल्लाका भारतीय जनता पार्टीका सांसद डा. जयन्त रोयले गएको वैशाख ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारले आफूलाई बाहिर निस्किन नदिइएको बताएका छन्।
‘घर वरिपरि बंगाल प्रहरीको टोली परिचालन गरेर आवतजावतमै रोक लगाइएको छ, निस्किन सम्भव छैन,’ भाजपा सांसद रोयले टेलिफोनमा भने।
त्यसैगरी, अलिपुरद्वार, डुवर्स, जलपाइगढीका भाजपा सांसद जोहन बारलालाई पनि चैत्र ३० गतेबाट नै बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ। उनको निवास वरपर प्रहरीले घेरिराखेको छ।
कोलकाता क्षेत्रमा चौबिस परगना जिल्ला अन्तर्गत व्यारेकपुरका भाजपा सांसद अर्जुन सिंह र जिल्ला दक्षिण दिनाजपुरको बालुरघाटका भाजपा सांसद सुकान्त मजुमदारलाई आफ्ना संसदीय क्षेत्रमा जाँदा प्रहरीले घरिघरि रोक्ने गरेको भाजपा प्रदेश कमिटीले जानकारी दिएको छ।
विरोधका बीच काम गर्दै केन्द्र जाँच टोली
जाँच टोली वैशाख ८ सिलगढी आएर स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेको छ। टोलीको नेतृव केन्द्र सरकारको मानव संसाधन मन्त्रालयका सचिव भीनसेन्ट जोशीले गरेका छन्।
अन्य सदस्यहरूमा स्वास्थ्य विकास तथा शिक्षा विभागीय प्रमुख प्रा. शिवानी दत्ता, राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन विभागका सल्लाहकार ब्रिगेडियर अजय ग्याङ्गवार, उपभोक्त विभागीय निर्देशक धर्नेश मकवाना, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सहनिर्देशक एनबी मनी रहेका छन्।
टोलीले कामको प्रगति दिनैपिच्छे केन्द्रमा रिपोर्ट गरिरहेको छ। तर, यो टोली आएर परीक्षण सुरू गरेपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले विरोध गरिरहेको छ। यो टोलीले दाजीलिङ कालेबुङ पनि संवेदनशील रहेको दावी गर्दै स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने छ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दार्जीलिङ र कालेबुङलाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा राखेपछि जीटीए प्रमुख अनित थापा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रमुख विनय तामाङले विरोध गरेको हुन्।
‘हामी पहाडमा कोरोनाबाट बच्ने सम्पूर्ण प्रयासमा जुटिरहेका छौँ, यहाँ त्यस्तो संवेदनशील अवस्था केही छैन,’ जिटिए प्रमुख थापाले भने।
कालेबुङकी सुनितादेवी सिंहको मृत्युपछि उनका परिवार र सम्पर्कमा आएका सम्भावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। र, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। तर, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अहिले उनीहरूलाई घर फिर्ता गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले वैशाख ८ गतेबाट संवेदनशील क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमको आवतजावतलाई भइरहेको कडाइ खुकुलो पारेको छ। यद्यपि, सिलगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ र ४७ लाई संवेदनशील मानिएपछि ती वडाहरूमाथि विशेष ध्यान दिइएको छ।
‘राज्यमा ३६ जना कोरोना संक्रमितको पुष्टि भयो, तर उनीहरू अधिकांशलाई ठिक भइसकेको छ, र उनीहरू घर फर्केका छन्,’
सिक्किममा कोरोना संक्रमण शून्य
सिक्किम मात्र भारतको एउटा यस्तो राज्य हो, जहाँ कोरोनाको प्रभाव परेको छैन। यद्यपि, लकडाउनको सामान्य प्रभाव हिमाली राज्य सिक्किममा परेको छ।
कोरोना संक्रमणको महामारी सुरू भएपछि सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले कोरोनाको महामारी भित्रिन नदिन सम्बन्धित सबै निकायलाई परिचालन गरे।
सबै प्रकारको सतर्कता पालना गराउन निर्देशन दिएपछि सिक्किममा कोरोना भित्रिन पाएन। अहिले लकडाउन कडाइका साथ लागू गरिएकाले पनि सिक्किममा कुनै किसिमको संक्रमण नहुने मुख्यमन्त्री गोलले बताएका छन्।
आसाममा ३६ जना संक्रमित, उपचारपछि घर फर्किंदै
भारतको पूर्वोत्तरको सबैभन्दा ठूलो राज्य आसाममा पनि राज्य सरकारले कोरोना नियन्त्रण अभियान तीव्र पारेको छ। मुख्यमन्त्रीले पनि कोरोनादेखि बँच्ने र बचाउने उपायहरूको पालना गराइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवल स्वयं हेलिकोप्टरमार्फत विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण गरिरहेको छन्। ‘राज्यमा ३६ जना कोरोना संक्रमितको पुष्टि भयो, तर उनीहरू अधिकांशलाई ठिक भइसकेको छ, र उनीहरू घर फर्केका छन्,’ मुख्यमन्त्रीले भने।
सोनोवलले लकडाउनको कडाइका साथ पालना गर्दै राज्यलाई कोरोनाको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन आवश्यक सम्पूण कदम राज्य सरकारले चाल्ने प्रष्ट पारेका छन्।